Posted by Thanlwin.usa at 5:01 AM No comments:
Posted by Thanlwin.usa at 4:55 AM No comments:
အန်တီလေး .. နောင်တရနေလားဟင်..
ဟာဟ ! ! (ချစ်စရာအသံလေးနဲ.)
ပြောပါဗျာ.. ... ကျနော့်ကိုမုန်းသွားပီလားလို. (ချွှဲပျစ်ပျစ်အသံဖြင့်ဖတ်ပါ)
ဗျာ ! !
ရှက်သလိုလိုဘာလိုလိုလုပ်ပီးသူမနှုတ်ခမ်းလေးကိုပြတ်ထွက်မတတ်၃ခါလောက်တအားစုပ်ပေးပလိုက်မိတယ်။ မျက်နာလေးကချစ်စဖွယ်မဲ့ပြပီး။ ခဏထကွာလူဆိုးလေး..ကျမသန်.ရှင်းရေး
ဘူးအပျင်းထူပီးစားပွဲပေါ်မှာပက်လက်အိပ်ပီးမျက်လုံးမှိတ်ထားပီးမှိန်းနေလိုက်တယ်။ (အားယူနေတာနော်ပရိတ်သတ်ကြီး )
ဘယ်လောက်ကြာသွားတယ်မသိဘူး။ ဖွင့်ထားတဲ့ကက်ဆက်ကိုပိတ်လိုက်တဲ့အသံချောက်ကနဲကြားပီး ကြည်လင်တဲ့ပီယာနိုတီးသံထွက်လာတယ်။
မာရီလင်မွန်ရိုးရဲ. ပြန်လမ်းမရှိတဲ့မြစ် (River of no return) ကိုတီးနေတာဗျ။ ကျနော်တော်တော်ကြွေတဲ့ခေတ်ဟောင်းသီချင်းပေါ့။ ထထိုင်ပီးကြည့်လိုက်တော့ကျနော့်မှာမှင်တက်နေမိတယ်ဗျာ။
ဧပရယ်လရဲ.လေရူးတွေကချထားတဲ့လိုက်ကာအစိမ်းလေးတွေကိုတဖတ်ဖတ်ခါစေပီး အခန်းထဲထိတိုးဝင်အလာ၊ ခုနကကျနော်သောင်းကျန်းပီးစားပွဲပေါ်ကဖယ်ချထားတဲ့ဂီတနုတ်စ်တွေရေး
ထားတဲ့စာရွက်ဖြူဖြူတွေကလေအဝှေ.မှာတစ်ခန်းလုံးနှံ.အောင်ပျံဝဲနေတယ်။ လှလိုက်တဲ့မြင်ကွင်း။ ဒီထက်ပိုလှစေတာက.. ..
ပီယာနိုတီးနေတဲ့ကျနော့်ဆရာမလေး .. ... ...
အ၀တ်မဲ့ကိုယ်လုံးလေး... ခါးလေးကော့ထားတော့တောင့်တင်းလွန်းတဲ့တင်ပါးလေးကခရမ်းချဉ်သီးဝါ၀ါလေးလိုပြောင်တင်းပီးလှလိုက်တာဗျာ။ ကျနော့်ဆီကနေဘေးတိုက်မြင်နေရတော့ခပ်
အယ်အယ်လေးအရှေ.ကိုစူထွက်နေတဲ့ရင်သားဝင်းဝင်းလေးကိုပါမြင်နေရတာ။ ရှည်လျားလွန်းတဲ့ဆံပင်နက်နက်တွေကလေတိုက်လို.တလူလူလွှင့်နေတယ်။ မျက်လုံးလေးတွေစုံမှိတ်ပီးသူမတီးခတ်နေ
တယ်။ ဘုရားသခင်..ကျနော်မြင်နေရတာ..ကျနော့်ဆရာမလေးလား... ဒါမှမဟုတ်ခေါမပုံပြင်ထဲနတ်မိမယ်ကျောက်ဆစ်ရုပ်ထုလေးလား... ကြည့်မိရင်ကျောက်ရုပ်ဖြစ်သွားစေတယ်ဆိုတဲ့ဂရိဒဏ္ဏာရီထဲကမီဒူဆာနတ်သမီးလေလား။
လေထီးမပွင့်ခဲ့ဘူး.. ... ....
သူမကတော့မျက်လုံးလေးမှိတ်ပီး ပီယာနိုခလုတ်တွေပေါ်လက်ချောင်းလေးတွေပြေးလွှားတို.ထိရင်းတီးခတ်နေတုံးပဲ။ အပြစ်ဆိုစရာမရှိတဲ့ကိုယ်လုံးလေးကိုကြည့်ရင်းကျနော့်သွေးတွေပွက်ပွက်ဆူစ
ပြုလာပြန်တယ်။ ငယ်ရွယ်နုပျိုဆဲကောင်လေးဆိုတော့လည်းစိတ်ကချက်ချင်းပြန်ထလာပြန်ပီဗျာ။ ကျနော့်စိတ်ကလည်းတော်တော်ရဲစပြုလာတယ်။ခုနကလိုကြောက်သလိုလိုလန်.သလိုလိုမဖြစ်
တော့ဘူး။ မရိုးမရွဖြစ်လာတာနဲ.တောင်မတ်စပြုလာတဲ့ကျနော့်ညီလေးနဲ.ထိုင်နေတဲ့အန်တီဆရာမလေးရဲ.လက်မောင်းသားအိအိလေးကိုအသာလေးထောက်လိုက်မိတယ်။ ရုတ်တရက်ဂီတသံစဉ်
အာကွာ ! ! တဲ့ (မျက်လုံးလေးပြူးပီးကြည့်နေတာချစ်စရာလေးဗျာ)
ကလေးလေး..ဟာကလည်းပြန်ဖြစ်လာတာမြန်လိုက်တာ.. ... ဆိုပီးလျှာလေးတစ်လစ်ထုတ်ပြပီးအောက်နှုတ်ခမ်းကိုသွားဖြူဖြူလေးနဲ.ကိုက်ထားတာတကယ့်အပျိုပေါက်မလေးကြနေတာပဲ။
တယ်။ ဖူးးးးးးး .... ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ ၁မိနစ်လောက်ငြိမ်ခံနေပီး။ သူမပုခုံးလေးကိုကျနော့်လက်၂ဖက်နဲ.စုံကိုင်ပီးဆွဲထူမလိုက်တယ်။ ကျနော်ပထမအခေါက်ကစိတ်မထိန်းနိုင်ပဲသောက်ရမ်းတွေဇွတ်လုပ်မိတာမြန်လွန်းသွားတယ်။ အန်တီဝင်နီဘယ်လိုမှကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျနော်သိတယ်။ ခုတစ်ခေါက်တော့ကျနော်
တအားမြန်လို.မဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဆရာ့ဆရာတွေရဲ.လက်ချာတွေအတိုင်း သေသေချာချာနူးနပ်ဖို.ပြင်တယ်။ (ကျနော်တို.ခေတ်ကခုလိုအောကားတွေဘာတွေဆိုတာရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျ၊အဲ့ဒီ
ရတာကိုး။ညစ်တီးညစ်ပတ်စာချိုးတွေ.. ဥပမာ.ေ-ာက်ဖုတ်သစ်ရွက်လုပ်ရခက်၊ေ-ာက်ဖုတ်မုန်.ပေါင်းလုပ်လို.ကောင်း၊ ဟုတ်တာတွေရောမဟုတ်တာတွေရောစုံနေတဲ့လိင်ပညာပို.ချချက်တွေနဲ.
သူတို.ကိုဆရာတင်ရတဲ့ကာလပေါ့။ ဆရာမောင်ထင်ရဲ.ကိုဒေါင်းဝတ္ထုတွေထဲက ကာလသားကြီးကိုဒေါင်းလိုလက်ချာပေးတဲ့ဆရာသမားတွေပေါ့။ခုပြန်ပြောရင်းတောင်သူတို.တွေကိုသတိရလိုက်
တာဗျာ :'( ။ ကဲထားပါတော့ဗျာ။ လိုရင်းမရောက်ပဲတော့ပစ်ချော်နေပီ..ဆက်ရအောင်)
မိတယ်။လျှက်ပေးနေရင်းနဲ.သူမဆီးခုံအပေါ်မှာကျနော့်လက်ချောင်းတွေကိုပို.ပီးကစားပေးလိုက်တာ... တဟင်းဟင်းနဲ.ညည်းစပြုလာပီ။ လက်ခလယ်နဲ.အကွဲကြောင်းလေးကိုစမ်းတော့စိုတိုတို
အိတိတိလေးဗျ။ကျနော်ရွရွလေးပွတ်ပေးလိုက်တော့ကျနော့်ပုခုံးပေါ်သူမခေါင်းလေးမှီတွယ်လာပီးခြေဖျားထောက်ပီး အာဟာ့...ဆိုတဲ့အသံထွက်လာတယ်။ အထဲကိုနည်းနည်းလေးလက်ခလယ်
ကိုပြောင်းပြန်လှန်ပီးထိုးသွင်းကြည့်တယ်။ ပြွတ်ကနဲလက်တစ်ဆစ်လောက်ဝင်သွားတယ်။ ထုတ်ချည်သွင်းချည်ကစားပေးနေလိုက်တော့အာ..အာ..အာ..ဆိုပီးညည်းသံတွေစိပ်လာပီ။ ကျနော့်
ပါးစပ်ကလည်းအငြိမ်မနေပါဘူး။ အပေါ်ပိုင်းမှာတိုက်စစ်ဆင်နေတာပါပဲ။ နို.သီးစူတူတူလေးတွေကိုဘယ်ပြန်ညာပြန်စို.လိုက်၊သွားလေးနဲ.မနာအောင်ဖွဖွလေးကိုက်ဆွဲလိုက်လုပ်ပေးနေတယ်။
ဒီလောက်နဲ.တော့ -ိုးလို.မဖြစ်သေးမှန်းကျနော်ကြားနာခဲ့ရတဲ့လက်ချာတွေအရသိနေတယ်။ ပေါင်၁၂၀လောက်ရှိတဲ့ဆရာမလေးရဲ.ကိုယ်လုံးအိထွေးထွေးလေးကိုစွေ.ကနဲပွေ.ချီပီးပထမတစ်ကြိမ်
ဟေးးးးး ! ! မလုပ်... ! ! အားးးးး .... ရှီးးးး ရှီးးးးး
ခေါင်းထောင်ထပီးကြည့်လာတဲ့ကျနော့်ဆရာမလေးအံ့သြတကြီးမျက်ဝန်းလေးတွေနဲ.ကျနော့်ကိုတားဖို.ကြိုးစားသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်နောက်ကျသွားပီ... ကျနော့်လျှာကအပြားလိုက်သူ.ေ-ာက်
ဖုတ်ကိုလျှက်မိသွားပီ။ မျက်လုံးစုံမှိတ်ပီးကျနော်လည်းအသားကုန်လျှက်တော့တာပေါ့ဗျာ။ ဖင်တုံးလှလှလေးခမျာအောက်ကစားပွဲနဲ.လွှတ်ထွက်သွားတဲ့အထိကော့ကော့တက်သွားတယ်။ကျနော့်
ကုလားဖြူဘာသာစကားမှာယောက်ျားနဲ.မိန်းမ -ိုးကြတာကိုစကားလုံးအမျိုးမျိုးနဲ.ဖော်ပြတယ်။ အားလုံးထဲကမှmaking love ဆိုတာကိုကျနော်အနှစ်သက်ဆုံးဗျ။
ညှစ်၊ဘာမှဖြင့်မစရသေးဘူးထမီလှန်..တဖြောင်းဖြောင်းနဲ.တွယ်..အောက်ကနာလို.အော်သံထွက်လာတာငါကွငါကွဆိုပီးအသားကုန်ဆောင့်အဲ့လိုမျိုးကိုတော့ Fucking: ဆိုတဲ့အဆင့်ပဲသတ်မှတ်
ချင်တယ် Having Sex:လို.တောင်မခေါ်ချင်ဘူးဗျ။ တော့ပစ်ချော်နေရင်ဆောရီးဗျာ..ဆက်ရအောင်
ခုဆိုကျနော်ချုပ်မိထားပီလေ။ သူမဖင်ဝိုင်းဝိုင်းအိအိလေးကိုလည်းလက်ဖ၀ါး၂ဖက်နဲ.ဆုတ်ကိုင်မိထားပီ။ ချက်ချင်းပဲဆရာသမားတွေရဲ.လက်ချာကိုကြားယောင်လာတယ်။(မင်းတို.မှတ်ထားရမှာ
သာသာလေးဖြေးဖြေးလေးဆက်ဂျာတယ်ပေါ့ဗျာ။ Largo: နရီလေးနဲ.နော်မှတ်မိတယ်မလား။ ဆရာမလေးကိုတချက်တချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့မျက်နာမှာချွေးစက်လေးတွေတောင်သီးနေ
ရှာတယ်။လည်ပင်းကသွေးကြောစိမ်းစိမ်းလေးတွေခမျာထင်းနေအောင်ထောင်ထနေတယ်။ ဒါသူအရမ်းကောင်းနေပီဆိုတဲ့အမူအရာတွေပဲမဟုတ်လား။စစချင်းမိနစ်ပိုင်းတုံးကအားး!! ရှီး!!အဟင့်
လိုက်တယ်(မျက်စိထဲမြင်အောင်ပြောရရင်ဟန်ဆာပလပ်စ် ပလာစတာကြော်ငြာထဲကပုံမျိုး)ပီးမှလက်မကိုအောက်စိုက်ပီး အောက်ကေ-ာက်ဖုတ်ကိုလျှက်နေရာရင်းေ-ာက်စိလေးကိုလက်မနဲ.ပွတ်
လိုက်သလိုဖြစ်လာလို.နေမှာ ဆရာမလေးဆီကမပီမသအော်သံညည်းသံတွေထွက်စပြုလာပီ... .... နောက်ဆုံးလုပ်မိလုပ်ရာလုပ်တဲ့အလားကျနော့်ဆံပင်တွေကိုသူမလက်၂ဖက်နဲ.တအားဆွဲ
အားးးးးးးးးးးးး !! ရှီးးးးးးးးးးးးးးးး !! မရတော့ဘူးမရတော့ဘူးသိလား... ဟားးးးးးးးးးးးး!! ဟားးးးးးးးးးးးး!! ကလေး..လေးးးးးးးးးးးးးးး !!
ကိုလျှော့ပေးလိုက်မှကျနော်လည်းအသက်၀၀ရှူနိုင်တော့တယ်။ မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ပီးခါးထောက်ရင်းငုံ.ကြည့်လိုက်တယ်။ကျနော့်ချစ်သူအန်တီဆရာမလေးဝင်နီရယ်လေ.. ... လှလိုက်တာ..
ကျနော့်ကိုလည်းကြည့်ကြပါဦးဗျာ။ မျက်နာတစ်ခုလုံးလည်းအချစ်ရည်တွေပေပွလို.။ နှုတ်ခမ်းတွေလည်းပျစ်ချွှဲချွှဲအရည်တွေနဲ.စိုပီးပြောင်လက်နေတာပေါ့။
တဲ့ဆရာမလေးကိုပြုံးကြည့်ရင်းကျနော်ဟာ ဥရောပတိုက်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ရာဇ၀င်ထဲကစစ်သူကြီး နပိုလီယန် ပါရီမြို.ထဲဗိုလ်ဝင်ခံဖို.၀င်အလာမှာခံစားရတဲ့ဖီလင်မျိုးခံစားနေရတယ်ဗျာ။(အင်း..
သောက်ပိုတွေလိုတော့မပြောနဲ.ဗျ..ရင်ဘတ်ချင်းဂျက်ပန်ပ်ထိုးပီးခံစားပါလို. ကဗျာဆရာမောင်ချောနွယ်ရဲ.စကားငှါးပြောချင်တယ် )
« Reply #12 on: February 12, 2011, 12:18:17 AM »
ခုဒီစတိုရီကိုကျနော်ရေးတာ၃ရက်လောက်ရှိနေပါပီ။ တစ်ရက်ကိုမနက်တစ်ပိုင်းညတစ်ပိုင်းမဖြစ်မနေရေးပီးတင်နေပါတယ်။ အရင့်အရင်နောင်တောင်ကြီးများရဲ.လက်ရာကိုစောင့်ဖတ်ခဲ့ရတုံးက
ဆန်.တငင်ငင်ဖြစ်ခဲ့တာကိုယ်တွေ.မို.စပီဆိုတာနဲ.မပီးမချင်းရေးဖို.ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ညီအကိုတို.ဖတ်လို.အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်အားထုတ်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ကျနော့်ကိုvote ကလစ်လေးတွေသာ
« Reply #13 on: February 12, 2011, 01:44:51 AM »
အမြင့်ဆုံးထိပ်ကိုရောက်သွားလို.မှိန်းမောနေတဲ့ဆရာမလှလှလေးရဲ.မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးပွင့်လာပီ။ စားပွဲလေးပေါ်ကနေခြေဆင်းထိုင်ချလိုက်ပီးကျနော့်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်။ ပီးတော့မှ
ပီ။အိထွေးထွေးနွေးနွေးလေးစပီးခံစားရတယ်။ စိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်ရတယ်။ လူတစ်ကိုယ်လုံးမြှောက်တက်ချင်သလိုဖြစ်လာလို.သူမခေါင်းကိုကိုင်ပီးမတ်တပ်ရပ်ရင်းခြေဖျားထောက်ပီးကော့ပေးနေ
လုပ်စို.နော်..ကျနော်မနေနိုင်တော့ဘူး .. ...
အန်တီဝင်နီလေးပြုံးစိစိလုပ်ပီးကျနော့်ကိုကြည့်တယ်ပီးတော့ကျနော့်ကိုလက်ကိုဆွဲပီး လာလို.ခေါ်တယ်။ သူ.အိပ်ခန်းထဲကိုခေါ်သွားတာဗျ။ ကုတင်ပေါ်သူအရင်တက်လိုက်ပီး.. ကလေးလေးက
တအားမာတင်းနေတဲ့ကျနော့်ညီလေးနဲ.တေ့ပီးဒစ်မြုပ်အောင်ဖိသွင်းလိုက်တယ်။ အင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး !!ဆိုပီး အန်တီလေးမျက်လုံးစင်းပီးညည်းတယ်။ ပီးမှဝါ၀င်းပီးတင်းမာလှတဲ့သူ.နို.၂
လုံးကိုစုံကိုင်လိုက်ပီးဆောင့်ချလိုက်တယ်။ အားးး... စီးစီးလေးဗျာ။ နို.တွေဆုတ်ချေနေရင်းပဲတစ်ချက်ချင်းဆောင့်သွင်းနေတယ်။ ဖူးးးးးးး!! ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ အပျိုကြီးေ-ာက်ဖုတ်နွေးနွေး
ကြီးကိုနို.၂လုံးစုံကိုင်ပီးဆောင့် -ိုး နေရတာဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာတွေးသာကြည့်ကြပေရော့။ အသာလေးအဲ့လိုဆောင့်နေရာကနေ.. .. အောက်ကတရှီးရှီးအော်သံနဲ.အတူ.. ....
ကလေးလေး.. သွက်သွက်လေးဆိုပီး ဆရာမလေးကမော့ကြည့်ပီးပြောလာတယ်။ ကျနော်လည်း အားနဲ.ပစ်ပစ်ဆောင့်ပီး -ိုး ပလိုက်တာ ခဏလေးပဲရှိသေးတယ်။ အား.. မရတော့ဘူးကွယ်...
ဘယ်လိုတွေလုပ်နေတာလဲ..ဟားးးးးးး ဟားးးးးးးးးးးး ဆိုပီးတွန်.လိမ်သွားပြန်တယ်။(ကျနော့်အတွက် အတွေ.အကြုံအသစ်ပေါ့ တချို.မိန်းမတွေဟာပထမတစ်ကြိမ်ပီး ရင်နောက်ထပ်ဆက်တိုက်
ကျနော်အံ့သြပီး -ိုးနေတာ ခဏရပ်လိုက်တယ်။ ပီးမှသူ.အပေါ်ကိုမှောက်ချလိုက်ရင်း နားရွက်ကလေးတွေကိုမနာအောင်ကိုက်ပေးပီးလေသံလေးနဲ.ကပ်ပြောလိုက်တယ်။
အန်တီလေး ဖင်ကုန်းပေးအနောက်ကနေဆောင့်ချင်တယ်လို.။ အာ..မင်းနော်..ဆိုပီးမျက်နာကိုရှုံ.ပြတယ်။ ဒါပေမယ့်ချက်ချင်းပဲပက်လက်အိပ်နေရာကနေလှိမ့်ပီးလေးဖက်အနေအထားပြင်
လိုက်တယ်။ ယောက်ျား၁၀၀မှာ၉၉ယောက်ကြိုက်တဲ့ ပိုဇေရှင်နော့်။ ကျနော်လည်းဆရာမလေးရဲ. အိုးဝိုင်းဝိုင်းစက်စက်လေးကိုလေးလလုံးလုံးငေးပီးစိတ်ကူးထဲမှာ အကြိမ်ကြိမ်ပစ်များနေခဲ့
တာ။ အင်း.. ဒီဖင်ကြီးကိုသာလေးဘက်ထောက်ပီးတွယ်လိုက်ရဆိုပီးတော့လေ။ ခုလက်တွေ.လုပ်ရတော့မယ်။ ကော့တက်လာတဲ့တင်ပါးဖြူဖြူဖွေးဖွေးကြီး ၂ခု၇ဲ.အလည်မှာကစအိုဝညိုတိုတို
« Reply #14 on: February 12, 2011, 02:23:18 PM »
တင်ပဆုံကားကားကြီးကိုအားရပါးရကိုင်ပီးခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်နေတာ ဆောင့်ချက်ပြင်းလို.လားမသိဘူး ဆရာမလေးခါးလေးတအားကော့တက်လာပီးလည်တိုင်လေးမော့လာတယ်။
ဆံပင်ရှည်လေးတွေတခါခါနဲ.မြင်းရိုင်းမလေးပြေးနေသလိုပဲ။ အဲ့ဒါကိုကြည့်ပီးကျနော်လည်းဇက်ကြိုးကိုင်ဖို.ကြိုးစားလိုက်တယ်။ ရှည်လျားနက်မှောင်ပီးအုံထူထူဆံနွယ်တွေကိုကျနော်ခါးကိုင်းပီး
ညာလက်နဲ.ရစ်သိမ်းပီးလှမ်းဆွဲလိုက်တယ်။ တအားကြီးတော့နာအောင်မဆွဲပေးဘူးပေါ့။ ပီးတော့မှဘယ်လက်ကသူ.ခါးကျင်ကျင်လေးကိုကိုင်ထားညာလက်ကဆံပင်ရှည်တွေကိုဆွဲပီးအားနဲ.ဆောင့်
တော့တာပေါ့။စိတ်ကူးထဲပုံဖော်ကြည့်ကြစမ်းပါဗျာ။ ဖင်ကုန်းပီးခံနေတဲ့ကျနော့်ဆရာမလေး ဆံပင်တွေကိုအဆွဲခံရပီးအ -ိုး ခံနေရရှာတာ လည်တိုင်လေးကော့ကော့တက်လို. အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ Z နဲ.
တူနေပီ။ စိတ်ကိုတအားတင်းပီးကျနော်လည်းမီးကုန်ရမ်းကုန်တွယ်တော့တာပဲဗျို.။ အနောက်ကနေမြင်နေရတဲ့သူ.တင်ပါးအလှပြူးပြူးလေးရယ်၊ ကော့တော့တော့ပျော့သွယ်သွယ်ကိုယ်လုံးလေး၊
ရူးခဲ့ရတဲ့ဆံနွယ်ရှည်လေးတွေကိုတင်းတင်းဆုပ်ပီးဆောင့်တော့သူ.ညည်းငြူသံ တဟင်းဟင်း... တရှီးရှီး ကြားနေရတာတွေကြောင့်ကျနော်ဘယ်လိုမှဆက်မထိန်းနိုင်တော့ဘူးဗျာ။
အားးးးးးးးးးး !! အန်တီလေး !! အားးးးးးးးးးး !! ထွက်ကုန်ပီ..ထွက်ကုန်ပီ... ... ဖူးးးးး!! ကောင်းလိုက်တာ အန်တီလေးရာ...
အဲ့လိုတွေကျနော့်ပါးစပ်ကပြောမိပြောရာတွေအော်မိကုန်တယ်။ သုတ်ရည်ပူပူတွေကိုလည်း အပျိုကြီးေ-ာက်ဖုတ်ထဲအင့်ကနဲအင့်ကနဲနေအောင်ပန်းထည့်လိုက်မိတယ်။ ... ... .... ... .... .....
(ဒီနေရာမှာကျနော့်အတွေ.အကြုံအရပြောရရင် ပီးခါနီးမှာပါးစပ်ထဲတွေ.ရာအော်ပီး ပန်းထုတ်လိုက်ရတာဟာ..အံကြိတ်ပီးတိတ်တိတ်လေးဆောင့်ရင်းပန်းတာထက်ပိုပီးကောင်းတယ်လို.ကိုခံစားမိတယ်ဗျ။ လုံးဝကိုပေါက်ကွဲထွက်သွားသလိုခံစားရတယ်။နောင်ရလာတဲ့အတွေ.
အကြုံအရမိန်းခလေးတချို.ကလည်းအဲ့လိုပဲပြောတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့်ရတနာဝင်းထိန်တို.ဘာတို.ရေးသလို.. ဆောင့်ပါမောင်ရဲ.ေ-ာက်ဖုတ်ကြီးနှစ်ခြမ်းကွဲထွက်သွားအောင်ဆောင့်ပါဘာညာတွေ
သူမဂုတ်ပိုးလေးကိုကျနော်မနာအောင်ကိုက်ပေးရင်းအမောဖြေနေလိုက်တယ်။ သာယာလိုက်တဲ့ဘ၀ဗျာ။ အိစက်ညက်ညောတဲ့ကိုယ်လုံးလေးကိုဖိကပ်ပီးအိပ်နေတာသာယာတာပေါ့လေ။
ကျနော့်ညီလေးကတော့အန်တီလေးရဲ.ေ-ာက်ဖုတ်ထဲမှာစွပ်ရက်တန်းလန်းကြီးတချက်တချက်သူ.ေ-ာက်ဖုတ်အတွင်းနံရံကကျုံ.ကျုံ.နေသေးတော့ကျနော့်ညီလေးခမျာဇိကနဲဇိကနဲဇိမ်တွေ.နေ
Posted by Thanlwin.usa at 1:57 AM 1 comment:
« Reply #16 on: February 12, 2011, 09:16:10 PM »
(မော်တော်ဆပ်=မတ်တပ်ဆော် )သေချာကြီးပြန်ရေးမပြတော့တာကစာဖတ်သူတွေအီသွားမှာစိုးလို.။ ရေမိုးချိုးပီးတော့၂ယောက်သားဧည့်ခန်းထဲမှာသန်.ရှင်းရေးလုပ်ရင်းတစ်ယောက်မျက်နာ
တစ်ယောက်ကြည့်ပီးကြည်နူးနေကြတာပေါ့လေ။ တခန်းလုံးပျံ.ကြဲနေတဲ့နုတ်စ်စာရွက်တွေလိုက်ကောက်ပီးထပ်နေတဲ့ အန်တီဆရာမလေးကိုမျက်လုံးမခွါတမ်းငေးကြည့်နေမိတယ်။ ထမီအ၀ါရောင်
လေးဝတ်ပီး၊တီရှပ်ကျပ်ကျပ်လေးဝတ်ထားတော့ ရင်သား၂မွှာလေးနေရာမှာအဖုအထစ်လေး၊ဆံပင်အရှည်တွေကိုတော့ လက်ကိုင်ပ၀ါအနီရောင်လေးနဲ.သေချာစည်းနှောင်ထားတယ်၊ရေမိုးချိုးပီးစ
မျက်နာပြောင်ပြောင်လေးကိုသနပ်ခါးရေကျဲလေးပွတ်ထားတော့ဝင်းဝင်းလေးဖြစ်နေတယ်။ တကယ့်ကိုကျနော်နဲ.အရွယ်တူကောင်မလေးလို.တောင်ထင်ရတယ်။ ပီးတော့သိသာတာကသူ.မျက်နာ
လေးဗျ။ မိန်းမတွေချစ်စိတ်ဝင်လို.ကြည်နူးနေတဲ့အခါဖြစ်နေတဲ့အမူအရာလေးတွေဗျာ။ ကျနော်သေချာမပြောပြတတ်ဘူး။ ကျနော့်ကိုတချက်တချက်လှမ်းကြည့်လိုက်မျက်နာလေးကပန်းရောင်သမ်း
အန်တီလေးကိုကျနော်အရမ်းချစ်တယ်သိလား.. .. ...
ခွိခွိ !! (ပါးစပ်ကိုလက်ဖ၀ါးလေးနဲ.ကာပီးရယ်နေတယ်ဗျ)
အမ် ! ဘာလို.ရယ်တာလဲ.. ... မရယ်နဲ. .. အန်တီလေးနော်ဟွန်း
ရယ်ချင်တာပေါ့.. .. သူများကိုလုပ်ချင်သလိုလုပ်ပီးမှ.. ... ချစ်ရေးလာဆိုနေတာကိုး.. ခွိ
ဟိုက်!! ဟုတ်တယ်ဗျ.. .. ကျနော်လည်းရှက်တာနဲ.ရယ်ကျဲကျဲလုပ်ပီးခေါင်းကုတ်နေလိုက်တယ်။ပီးမှအရဲစွန်.ပီးစကားစလိုက်တယ်။
ဟိုဟာလုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲအန်တီလေး.. .. ဟီးဟီး
အာကွာ..ညစ်တီးညစ်ပတ်တွေလာမမေးနဲ. ..တွေ.တယ်မလားဆိုပီး ကြက်မွှေးတံမျက်စည်းလေးကိုထောင်ပြတယ်.. ... .. ပီးတော့တဖက်လှည့်သွားပီးကျနော်တို.ပထမဆုံးသောင်းကျန်းခဲ့
တဲ့ဆက်တီစားပွဲပုလေးကိုရေစိုအ၀တ်နဲ.သုတ်နေတယ်။ စားပွဲပုလေးဆိုတော့ကုန်းပီးသုတ်နေရတော့သူ.တင်ပါးလေးကထမီအ၀ါလေးအောက်မှာတင်းနေတာပဲ။ ကျနော်လည်းသူ.ကိုနောက်
ချင်နေတာနဲ.အသာလေးကပ်သွားပီးခါးကနေစုံကိုင်ပီး၂ချက်လောက်ကပ်ဆောင့်လိုက်တယ်။ ဟဲ့ဟဲ့..ဆိုပီးခါးကိုဆန်.လိုက်ပီးရှုံ.မဲ့မဲ့လေးကျနော့်ဖက်လှည့်လာတယ်။ ချစ်တယ်အန်တီလေးရာ.
လို.သူ.မျက်လုံးထဲကိုစိုက်ကြည့်ပီးကျနော်ပြောရင်းနဖူးလေးကိုကျနော့်နှုတ်ခမ်းနဲ.ဖိကပ်ပီးနမ်းမိတယ်။ မျက်နာချင်းပြန်ခွာလိုက်တော့ ငါ့ကိုရူးအောင်တော့မလုပ်နဲ.နော်တဲ့မျက်ရည်ဝဲ၀ဲလေးအသံ
တုန်တုန်ရီရီလေးနဲ.ကျနော့်ကိုတောင်းပန်သလိုပြောရှာတယ်။ ဟုတ်ဆရာမလေးဆိုပီး..သတိဆွဲရင်းမျက်နာမာမာနဲ.အော်လိုက်တော့ချက်ချင်းပြုံးပြုံးလေးဖြစ်လာပီး ကလေးလေးအရူးလေးတဲ့
ကျောင်းစိမ်းဝတ်စုံနဲ.အသားညိုညိုဆံထုံးထုံးထားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဗျ။ ကျနော့်ကိုကြည့်နေတာမျက်နာကပြုံးစိစိနဲ.။ ကျနော်ချက်ချင်းသိလိုက်ပီ။ ဒါအန်တီလေးနဲ.တူတူနေတဲ့ကျောင်း
တာလဲဆိုတာရိပ်မိသွားပုံရတယ်ဗျ။ကျနော်ရှက်သွားလို.သူ.မျက်နာတောင်သေချာမကြည့်၇ဲတော့ဘူး။ အသာလေးနောက်လှည့်ထွက်လာပီးဟိုလိုဒီလိုလုပ်နေတယ်။ အန်တီလေးကိုမသိမသာရှိုး
လိုက်တော့သူလည်းတော်တော်ရှက်နေပုံရတယ်ဗျ။သူကပိုဆိုးမှာပေါ့ ဒီလောက်အနေတည်တဲ့အပျိုကြီးလေ။ ၅မိနစ်လောက်သူတို.၂ယောက်စကားတွေပြောနေကြတာကျနော့်မှာအူကြောင်ကြောင်ကြီး ဟိုဟာလုပ်ရမလိုဒီဟာလုပ်ရမလိုနဲ.။ ပီးမှအန်တီဝင်နီလေးက..ဖိုးသက်ပြန်လို.ရပီတဲ့။ ခပ်တည်တည်
နဲ.ကျနော့်ကိုမကြည့်ပဲပြောတော့..ဟုတ်ကဲ့ဆိုပီးနုတ်စ်စာရွက်တွေကောက်ကိုင်ပီး...ဟိုအမျိုးသမီးကိုပြန်တော့မယ်ခင်ဗျဆိုပီးနှုတ်ဆက်ရင်းလစ်ထွက်လာခဲ့တယ်။စိတ်ထဲမှာတော့ အမလေး.. ..
ကံကောင်းလို.ဧည့်ခန်းထဲမှာဖင်တုံးလုံးနဲ.လုပ်နေရင်းသာမိသွားလို.ကတော့သောက်ရှက်ပဲလို.။ တံခါးပိတ်ထားတာတော်သေးတယ်။ ခုတောင်ရိပ်မိနေပီလားဆိုပီးတွေးရင်း အပြန်မှာရှက်သလို
လိုရင်တုန်သလိုလိုဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့်ခဏပါပဲ။ လောလောဆယ်ကျနော့်ပီယာနိုဆရာမလေးကို စိတ်ရှိသလိုတွယ်ခဲ့ရတော့ကြည်နူးနေတဲ့စိတ်ကပဲကြီးစိုးနေတာကိုးဗျ။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့အူမြူးနေလို.မေမေကတောင် ဒီကောင်အပမှီလာသလားမသိဘူးဆိုပီး ဖေဖေ့ကိုပြောနေသေးတယ်။
« Reply #17 on: February 14, 2011, 02:29:52 PM »
အဲ့ဒီနေ.ကမှတ်မှတ်ရရ အေပရယ်၂၁ရက်သောကြာနေ.ဗျ။ သေတဲ့အထိမေ့နိုင်မှာမဟုတ်တော့ တဲ့ရက်စွဲတစ်ခုပေါ့။
ညဖက်ရောက်တော့ကျနော်အိပ်လိ်ု.မရဘူး။ အိမ်ခြံဝင်းထဲဆင်းလာပီး သစ်သားကွပ်ပျစ်ကလေးပေါ်မှာပက်လက်လှန်လှဲလျောင်းပီးကောင်းကင်ထဲကကြယ်တွေကြွေကျတာကိုငေးမောနေမိတယ်။
ရင်ဘတ်ထဲမှာတော့ခံစားချက်ကမွှေးမြမြလေးဖြစ်လို.။ ကြည်နူးတဲ့စိတ်ကတအားပြင်းထန်လာလို.ဟာမိုနစ်ကာလေးကို ထုတ်ပီး Andy Williams ရဲ. Love story: ဆိုတဲ့သီချင်းကိုတိုးတိုးလေးမှုတ်
ချိုမြိန်တဲ့အချစ်ပုံပြင်ဆိုတာ.. ... ... ပင်လယ်ထက်ပိုပီးအိုမင်းတယ်.. ...
... ... ....ကြယ်တွေအကုန်လုံး လောင်ကျွမ်းသွားတဲ့အထိ.. ... ... သူမကိုကျနော်လိုအပ်နေဦးမယ်ဆိုတာ.. ကျနော်သိတယ်.. ... ...
(Andy Williams၏Love story:သီချင်းမှ)
ထားပေးတဲ့ပဲရွက်စိမ်းစိမ်းထည့်ထားတဲ့ခေါက်ဆွဲကိုအားပါးတရစားနေမိတယ်။ စားသောက်ပီးတော့ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ.တီရှပ်တစ်ထည်ကောက်စွပ်ပီး၊ ကျနော့်နီညိုရောင်ဂစ်တာလေးကိုဂစ်တာ
အိပ်ထဲထည့်ပီးလွယ်လိုက်တယ်။ ပြိုင်ဘီးလေးကိုတွန်းပီးထွက်လာတော့မေမေကအိမ်ရှေ.ကနေ ဒါကဘယ်လဲလို.မေးငေါ့ပီးမေးခွန်းထုတ်တယ်။ ဂစ်တာသွားကျင့်မလို.မြို.ပြင်မှာ၊နေ.လည်စာပြန်မစားတော့ဘူးမေမေလို. အသံမတုန်အောင်သတိထားပီးပြောရင်းလစ်ထွက်လာခဲ့တယ်။ ခြံဝမှာဖေဖေ့ကိုတွေ.တော့စက်ဘီးနင်းနေရင်းပြောင်
ချော်ချော်နဲ. Adios Amigo: (တာ့တာရဲဘော်လို.) လက်ပြပီးအော်ခဲ့လိုက်တယ်။
လမ်းမှာနေကတော်တော်ပူတာဗျ။ မနက်ခင်း၁၀နာရီလောက်ရှိပီဆိုတော့ကျနော့်မှာစက်ဘီးနင်းရင်းချွေးတွေတော်တော်ပျံလာတာဗျ။ယူကလစ်ဝင်းထဲရောက်တော့မှအမောပြေတော့တယ်။ လေကတဖြူးဖြူး၊ သစ်ပင်တွေကနေပျောက်မထိုးတော့အေးစိမ့်နေတဲ့အပြင်ယူကလစ်ရွက်အနံ.ယဉ်ယဉ်လေးတွေရတော့စိတ်ကိုကြည်
လင်ပီးနေလို.ကောင်းသွားတယ်။ အန်တီဝင်နီတို.ခြံဝင်းထဲဝင်သွားတော့ထုံးစံအတိုင်းတိတ်ဆိတ်ပီး သစ်ရွက်လေတိုးသံတရွှီးရွှီးကလွဲလို.ဘာသံမှမကြားရဘူး။ တိုက်ပုလေးရဲ.ဆင်ဝင်အောက်မှာ
ကျနော့်ပြိုင်ဘီးလေးကိုထောင်ထားခဲ့ပီးအိမ်ထဲဝင်သွားတော့ဧည့်ခန်းထဲမှာ အန်တီလေးကိုမတွေ.ဘူး။ ကျနော့်ဂစ်တာအိပ်ကိုအသံမမြည်အောင်အသာလေးဧည့်ခန်းထောင့်မှာထောင်လိုက်ပီး
ဘယ်များရောက်နေလဲငါ့ချစ်ချစ်ဆရာမလေးဆိုပီးဟိုကြည့်ဒီကြည့်လုပ်ရင်းရင်ခုန်လာတယ်။ မနေ.ကမြင်ကွင်းတွေကခုထိမျက်စိထဲကမထွက်ဘူး။ ဟိုဆက်တီစားပွဲနေးပေါ်မှာကျနော့်အန်တီ
လေးကိုကျနော်တွယ်ခဲ့တာ.. ... ဒီပီယာနိုကြီးရှေ.မှာသူ.ကိုကျနော်ဖက်နမ်းလိုက်တာ... အဲ့လိုတွေတွေးရင်းအောက်ကညီတော်မောင်ကငေါက်တောက်တောက်လေးဖြစ်ပီးထလာပြန်တယ်။ ဟီး
မတွေ.ဘူးဗျ။ သန်.ပြန်.နေတဲ့အိပ်ယာဖြူဖြူလေးပေါ်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူး။ မနေ.ကကုတင်ဇောင်းပေါ်မှာကျနော်ကောင်းဘွိုင်တစ်ယောက်လိုမြင်းစီးခဲ့တာတွေးမိသွားလို.အာခေါင်တွေတောင်
ခြောက်သလိုလိုဖြစ်ပီးရေငတ်လာတယ်။ဒါနဲ.မီးဖိုခန်းဖက်အသာလေးဆက်လျှောက်လာတော့.. ရေချိုးခန်းထဲကတဗွမ်းဗွမ်းရေကျသံတွေကြားလိုက်ရတော့ပြုံးမိတယ်။ ဟိဟိ...ဆရာမလေးနေမှာ.. အသာလေးကပ်သွားတော့ရေချိုးခန်းတံခါးကစေ့ရုံစေ့ထားတာဗျ။ ကျနော့်သွေးတွေပွက်ပွက်ဆူလာပြန်တယ်။ ဖူးးးးးးးးးး ... .... ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဘာလုပ်လိုက်မှန်းမ
၀ုန်း !! အန်တီလေးးးးးးးးးး !! အိုးးးးးးးး
မြင်ကွင်းကိုကြည့်ပီးကျနော်မှင်တက်နေမိတယ်။သွားရောဗျာ.. အန်တီလေးမဟုတ်ဘူး။ မနေ.ကတွေ.တဲ့အန်တီလေးသူငယ်ချင်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီး။
ရေချိုးခန်းတံခါးဝဖက်မျက်နာမူပီးဒူးထောက်ပီးဆပ်ပြာတိုက်နေတာ။ ထမီကိုရင်မလျားထားဖူး၊ခါးလောက်အထိပဲပတ်ထားတော့အပေါ်ပိုင်းကဟင်းလင်းကြီး... နို.ကြီးနှစ်လုံးညိုစိမ့်စိမ့်နဲ.ဆပ်ပြာ
တွေတိုက်ထားတော့ဖြူဖြူအမြုပ်တွေကြားထဲထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတယ်။ တော်တော့်ကိုထွားတဲ့နို.ကြီးတွေဗျာ။ မျက်နာလွဲလို.မရအောင်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတယ်။ ခေါင်းလျှော်ထားတော့
ဆံပင်တွေစိုကပ်ပီးပုခုံးပေါ်မှာအထွေးလိုက်ကလေးဖြစ်နေတယ်။ အောက်ကပေါင်တန်တုတ်တုတ်ကြီးတွေကရေစိုထမီအောက်မှာထင်းပီးတင်းတင်းရင်းရင်းဖြစ်နေတယ်။ အသားကနဂိုကညို
တိုတိုလေးဆိုတော့ရေစိုအလှနဲ.အင်မတန်ကြည့်ကောင်းလွန်းလို.ကျနော်၁၀စက္ကန်.လောက်ငေးကြည့်နေရင်းသတိဝင်လာလို. ကန်တော့အမ.. ကန်တော့လို.အော်ပီး တံခါးပြန်ပိတ်ပေးလိုက်ပီး
ဧည့်ခန်းကိုထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်။ တကယ့်သောက်ဂွဗျာ.. ကျနော့်ညီလေးကတွယ်ရတော့မလားဆိုပီးမာတောင့်နေတော့ ဂျင်းပန်အောက်မှာဖောင်းကားနေတာမြင်သွားပီလားမသိဘူး။ ဒီလိုသာ
ဆိုကျနော်နဲ.အန်တီလေးတို.ဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးသိသွားလောက်ပီ။ ဒုက္ခပါပဲဆိုပီး ခုနကဖြစ်နေတဲ့တက်ကြွမှုတွေပျောက်သွားပီး ရှက်စိတ်တွေဖုံးလာတယ်။ အန်တီလေးက
လည်းဘယ်သွားနေမှန်းမသိပါဘူးဗျာ။ ဧည့်ခန်းထဲမနေရဲတော့လို.အိမ်ရှေ.ဆင်ဝင်အောက်ထွက်လာပီးစီးကရက်တစ်လိပ်ဖွာနေမိတယ်။မိနစ်၂၀လောက်ကြာတော့.. ဟေးမောင်လေး!! အိမ်ထဲ
၀တ်ထားတာကပါးလျလွန်းတော့အောက်ကဘရာအနီရဲရဲကိုမြင်နေရတယ်။ ရင်သားတွေကကြီးလွန်းတာကြောင့်လားမသိဘူးတအားစူထွက်နေသလိုပဲ။ ဟုတ်အမ!! ဆိုပီးသူ.ပြုံးစိစိမျက်နာကို
သေချာမကြည့်ပဲအိမ်ထဲလိုက်ဝင်မိတယ်။ ကျနော့်ကိုကျောပေးလိုက်တော့မှသူ.နောက်ပိုင်းကိုသေချာမြင်ရတယ်။ ခါးက၂၁လောက်ပဲရှိမယ်ထင်တယ်။ကျင်ကျင်လေးသိမ်နေပီးအောက်ပိုင်းကို
ကားထွက်သွားတဲ့အိုးကြီးကအယ်ထွက်နေတာ။လမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်းတုန်တုန်တက်သွားတယ်။ အင်း... မဖြစ်သေးပါဘူးဆိုပီးအကြည့်ကိုလွှဲပလိုက်ရတယ်။
« Last Edit: February 15, 2011, 10:01:29 PM by channko »
« Reply #18 on: February 14, 2011, 02:39:14 PM »
အမှတ်တရဖြစ်သွားအောင်ခုရေးနေတဲ့ ကျနော့်ပီယာနိုဆရာမလေးဇတ်လမ်းအတွက် မျက်နာဖုံးသရုပ်ဖော်ပုံဆွဲနေတယ်ဗျို.။
ဖေဖော်ဝါရီ၁၄အမှတ်တရဖြစ်သွားအောင်ပါ။ ရေးနေတာရပ်လိုက်လို.စိတ်မရှည်ဖြစ်မှာစိုးလို.အသိပေးတာပါဗျ။ ဒီနေ.ညဒီဇတ်လမ်းရဲ.သရုပ်ဖော်ပုံလေးတင်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်။
Posted by Thanlwin.usa at 1:56 AM 1 comment: